Ioli e-flaxseed kwi-acne
Ubuhle bomfazi Ukunyamekela ubuso
Kwi-cosmetology, ukuphumelela kweoli yemifuno kuye kwangqina kaninzi, kuba amafutha okunomsoco anondla kakuhle kwaye aphucula imeko yesikhumba. Namhlanje sinqumle ukukuxelela malunga nendlela i-flax yeoli ye-acne eya kukunceda ngayo ukulahla le mpazamo. Kule nto, sikubonelela iindlela ezininzi zokusebenzisa ioli e-linseed ekhaya.
Malunga neoli edibeneyo
Ioli e-flaxseed inezixhobo ezininzi zokwelapha. Iphelisa ngokuphumelelayo konke ukucaphukisa, ukuvutha kwesibindi, ngenxa yeso sizathu, i-cosmetology ayizange ibeke eceleni ize ityhilile iimfihlelo zeoli ye-linseed kwi-acne.
Ngenxa yobungakanani bendalo bekhemikhali, i-linseed ioli igcina ilusu. Ngendlela, kubonga kwindlela yokunyusa okubandayo, le oli ikwazi ukugcina uluhlu olupheleleyo lwezakhiwo. Ngaphezulu, ioli yefelk iqukethe iivithamini ezinobuncedo-A, E, B, K ne-F. Ezi iivithamini zinceda ukuphucula ngempumelelo imeko yesikhumba.
Amavithamini E no-A kuphela, eziqulethwe kwioli ye-linseed, zikhusela ngokupheleleyo ukubonakala kwe-acne ebusweni besikhumba, ngoko le mveliso ilungele ukunakekelwa kwesikhumba, ejongene nokubonakala kwe-acne. Ngokuqhelekileyo, ioli ye-flax isetyenziswe ngendlela ye "appliqués" okanye idibene ngokungabikho kwindlela yokwenza imaski.
Ioli e-flaxseed kwi-rashes ne-acne: zokupheka kwabantu
Thatha iipilisi ezi-3 ze-kefir, i-1 isipuni sefulawa, iispuni ezimbini ze-lemon juice kunye ne-1 teaspoon yeoli ye-flaxseed. Emva koko zonke izithako zixutywe ngokupheleleyo. Faka isicelo semaski, sinconywa imizuzu eyi-15, uze ususe ngamanzi afudumele. Yenza le maski kwi-acne 1 ngexesha kwiiveki ezimbini.
Ukuthungwa kwe-mask-scrub epholileyo kuphucula kakuhle ukubonakala kwesikhumba ebusweni. Ukudala le-mask-skaba, sithatha i-oat flakes kunye neoli ye-linseed in proportions of equal size, kwaye ke sixubushe ngokucophelela kwaye ukutshiza kwethu kulungele ukusetshenziswa.
Faka isicelo se-mask-scrub kwisikhumba esasicocekileyo kunye nesinyameko sokunyakaza ukujikeleza imizuzu emithathu, emva koko kufuneka ubambe imaski yobuso imizuzu engama-15 uze ususe ngokuhlamba ngamanzi kwiqondo lokushisa.
Ukucocwa kwe-Acne Lotion
Ioli efihliweyo kunye nezinye izithako zingasetyenziselwa ukuhlanjululwa ngokufanelekileyo nokukhusela okukhuselekileyo kwesikhumba sengxaki ebusweni.
Ukuze silungiselele i-lotion, sithatha i-yolk enye yeqanda, ikomityi yekomityi ye-ukhilimu wabisi kunye nepunipoyi yeoli ye-flax. Emva koko, kwinqanawa eyahlukileyo sinyusa i juisi kwisiqingatha se-lemon esitsha, kwaye isiqingatha esisele esityiweyo kunye ne-peel sayo sinqunywe kakuhle kwaye sithululwa malunga nesiqingatha seglasi yamanzi abilayo. Emva koko sigubungela le nqanawa ngokuqinileyo ngesiqhekeza kwaye siyimisele ukuma imizuzu eyi-10-15.
Ngoku, ngokucwangcisa isicwangciso, sinyamezela ukumnika i-lemon kwaye sixube kunye nejisi lemon, esongeza ezimbini iibheyoni zezilwanyana zendalo kwisisombululo.
Emva koko, kufuneka sidibanise imixube emibini elungiselelwe (i-yolk yeqanda kunye nekrimu kunye ne-bhotile kunye ne-infusion lemon, ubusi kunye nejusi). Apha songeza malunga nekota yeglasi ye-camphor yotywala.
Ngenxa yoko, i-lotion kufuneka ichithwe kuyo nayiphi na ingxowa yeglasi, vala ngokukhawuleza ngesigubungelo kwaye ugubungele amaxesha ambalwa.
Lo lotion, ngaphandle kokuhlanjululwa kancinci kunye nokususwa kokuvuvukala, kunomphumela wokuphucula kunye nefuthe. Lo lotion unconywa imihla ngemihla nge-cotton swab ukusula ulusu lobuso ekuseni nangobusuku ngaphambi kokulala. Ekupheleni kwemizuzu engama-15 emva kwenkqubo. Kubalulekile ukuhlamba ubuso bakho ngamanzi afudumeleyo.
Ukongezelela kwiimonkco ze-acne, ezilungiselelwe ngesiseko seoli ye-flaxseed, le mveliso ingathathwa ngaphakathi. Ngenxa yoko, kufuneka uphuze iipunipoli ezimbini zeoli e-linseed ngesidlo sasekuseni kunye nesidlo. Ngokuqinisekileyo, umphumo awuyi kubonakalisa ngokukhawuleza, kodwa emva kweveki ezimbini ngokuqinisekileyo uya kukwazi ukubona ukuba ulusu lolusu luye lwaphucuka ngokuphawulekayo, kwaye izibhunqa zincinci kakhulu. Oku kubangelwa ukuba le oli iyakwazi ukususa emzimbeni onke ama-slags avuselela ukukhuza isikhumba kwaye, ngokufanelekileyo, ukubonakala kwe-acne.
Ukupheka kweemaski ezivela kumabhakede azungeze amehlo
Iimaski zokuphucula umbala, izilwanyana zomntu
Ukunyameka kweMil emva kokubhala umzobo
Kunokuba unako ukususa amachashaza amnyama kwimpumlo
Ngaphantsi kokukhuselwa kwe-edelweiss: umgca wezinto eziza kuguga uHelena Rubinstein u-Prodigy Reversis
Ukulungiswa ngokucokisekileyo kwesikhumba sokuguga
Masks ebusweni ekhaya ukusuka kwiidroti
Ukulungiselela izitya ezikhethiweyo zePasika
Isonka ngewayini elibomvu
I-Tocopherol acétate vitamin E kunye nokukhulelwa
Yintoni eya kuyenzeka ngo-2018 kwiNtombikazi
Luhlobo luni lwesilwanyana esinokulikhetha ekhaya nakwiintsapho
Indlela yokukhetha ibhokhwe kwabasetyhini abakhulelweyo
Umtshato omhlophe: iholide yokuhlanzeka nokungabi namacala
Uhlobo lweSmoothie lwasehlobo
Isonka sekhaya esheshayo
Ungaqonda njani ukuba ukuzalwa kuqala?
Ioli efunekayo ukusuka kumaqabunga
Ukwenziwa komzimba: izipikili ezinempilo kunye ezihle
I-Cupcake ngewayini elibomvu
Indlela yokubuya nokugcina indoda ethandekayo
I-Stylish and modern: umgca we-Avgvst Basic jewelry
Indima yabazali kwimpilo yabantwana
Iindlela zokupheka ezisetyenziswayo kwiinyanga ezili-10